Забур 71 CARS - Nnwom 71 ASCB
1Ao Awurade, wo mu na me dwane hinta;
2Wo tenenee no enti, yi me na gye me;
3Yɛ me nkwagyeɛ botan
faako a mɛtumi akɔ daa;
hyɛ ma wɔmmɛgye me nkwa,
na wo ne me botan ne mʼaban.
4Ao me Onyankopɔn, gye me firi amumuyɛfoɔ nsam,
gye me firi nnebɔneyɛfoɔ ne atirimuɔdenfoɔ nsam.
5Na woayɛ mʼanidasoɔ, Ao Asafo Awurade,
mʼahotɔsoɔ firi mʼababunu berɛ mu.
6Ɛfiri awoɔ mu, mede me ho ato wo so;
wo na woyii me firii me maame yafunu mu.
7Mayɛ nhwɛsodeɛ ama bebree,
nanso wo ne me dwanekɔbea denden.
mekamfo wʼanimuonyam da mu nyinaa.
9Nto me ntwene ɛberɛ a mabɔ akɔkoraa;
mʼahoɔden sa me mu a, nnya me.
10Ɛfiri sɛ mʼatamfoɔ kasa tia me
wɔn a wɔtwɛn sɛ wɔbɛkum me no bom pam me tiri so.
11Wɔka sɛ, “Onyankopɔn agya no mu;
momma yɛnti no na yɛnkyere no,
na obiara nni hɔ a ɔbɛgye no.”
12Ao Onyankopɔn, mfiri me nkyɛn nkɔ akyiri;
Ao me Onyankopɔn, yɛ ntɛm bɛboa me.
13Ma wɔn a wɔbɔ me soboɔ no nsɛe animguaseɛ mu;
wɔn a wɔpɛ sɛ wɔpira me no
ma ahohora ne animguaseɛ nkata wɔn so.
14Nanso me deɛ, mɛnya anidasoɔ daa;
mɛkɔ so makamfo wo.
15Mɛka wo tenenee ho asɛm,
ne wo nkwagyeɛ da mu nyinaa,
nanso mennim ano.
16Ao Otumfoɔ Awurade, mɛba abɛpae mu aka wo nnwuma akɛseɛ no;
mɛpae mu aka wo nko ara tenenee akyerɛ.
17Ao Onyankopɔn, ɛfiri mʼababunu berɛ na wokyerɛkyerɛɛ me,
na ɛbɛsi ɛnnɛ yi, meka wʼanwanwadeɛ a woayɛ kyerɛ.
18Mpo sɛ mebɔ akɔkoraa na mefu dwono a,
Ao Onyankopɔn, nnya me,
kɔsi sɛ mɛka wo tumi ho asɛm akyerɛ nkyirimma,
19Ao Onyankopɔn, wo tenenee duru sorosoro,
wo a woayɛ nneɛma akɛseɛ.
Ao Onyankopɔn, hwan na ɔte sɛ wo?
20Mmom woama mahunu ɔhaw bebree a ɛyɛ yea;
na wobɛyi me bio
afiri asase ase.
21Wobɛhyɛ me animuonyam bebree
22Mede sankuo bɛkamfo wo
Ao me Onyankopɔn, wo tenenee enti
mɛto wʼayɛyi dwom wɔ sankuten so
Ao Israel Kronkronni.
23Mʼanofafa de anigyeɛ bɛteam
ɛberɛ a meto dwom kamfo woɔ,
24Me tɛkrɛma bɛka wo tenenee nnwuma
ɛfiri sɛ wɔn a wɔpɛ sɛ wɔha me no
kɔ animguaseɛ ne basabasayɛ mu.
ASCB : Nnwom 71